February 28, 2021 1084
तनहुँको व्यास २ मालेबगर निवा’सी विवेक थापा मगरको मोटर’साइकल दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । दमौ’लीबाट घाँसीकुवातर्फ जाँदै गरेको ग १९ प २७३ नम्बरको मोटर’साइकल रोडमै प ल्टिँ दा २२ व’र्षीय विवेक ज्या’न गएको हो ।
टाउकोमा चो ट ला गेका उन’लाई दमौली अस्पताल लागि:एकोमा चिकित्सकले मृ त घोष’णा गरेको बताइएको छ । बाइक पछाडि सवार २० वर्षीया रजनी गुरुङको दमौलीमा उप:चार भईरहेको छ । सडक चि’प्लो भएकाले मोटर:साइकल अनि:यन्त्रित भएर दु’र्घटना भएको आशंका गरिएको छ ।
थापा ईन्डियन आ’र्मी रहेको र ४४ दिनको छुट्टिमा घर आए’को बताइन्छ । केही वर्ष अघि सोहि ठाउँ नजिकै २ जना ई’ण्डियन आर्मी युव’कको पनि बाइक दुर्घट’नामा नि’धन भएको थियो । तस्विरः सुमन श्रेष्ठको फेसबुकबाट
यो पनि… तनहुँको व्यास नगरपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घ’टनामा युवकको नि धन
पृथ्वीराज’मार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगर’पालिका–२ बुल्दी पुल नजिक गए राति भएको मोटरसा’इकल दुर्घटनामा एक युवाको नि’धन भएको छ । दुर्घ’टनामा एक युवती घा’इते छन् ।
मृ त्यु हुनेमा व्यास–२ मालेबगर बस्ने २२ वर्षीय विवेक थापा’मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र हरी नायब उपरीक्षक युवराज ति मिल्सिनाले जानकारी दिए । दुर्घ टनामा मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ बस्ने २० वर्षीया रजनी गुरुङ घा इते छन् ।
दमौलीबाट घाँसीकु वातर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकल अनि यन्त्रित भई पल्टिँदा घाइ ते भएका विवेकको टा उ कामा चो ट ला गेको थियो । विवेकको दमौली अस्प तालमा मृ त्यु भएको प्रह रीले जनाएको छ । शनिबार साँझदेखि पानी परेकाले सडक चिप्लो हुँदा मोटरसाइकल दुर्घट ना भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । – ताजा खबर
Prevखुशीको खबर: नेपाली चेली सृजना अमेरिकन आर्मिको उच्च पदमा छनोट हुन सफल…
Nextलाइभ कार्यक्रम चलाइरहेका पत्रकारलाई बन्दु’क तेर्स्याइयो, यसरी लुटि’यो (भिडियो सहित)
पुष्पा अधिकारीले संचालन गरेको केयर बालगृहका ११ बालिकाको उद्धार
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (65715)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (63885)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52399)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (51723)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (51233)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (47097)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46833)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41704)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (39207)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (34036)
एमसीसीको पक्षमा काँग्रेस, एमसीसी कुनै हालतमा रोक्न हुन्न – शेरबहादुर देउवा
फेरि पनि बढ्यो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, प्रति लीटर कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
आजको द भ्वाईस नेपालको लाईभ प्रस्तुति हेर्नु`होस् (भिडियो सहित)